I-Aviary 1BR1B (I-WIFI YAMAHHALA + NETFLIX + SOLAR)
Kampala, Central Region, i-Uganda
Indawo yonke ibungazwe ngu-Noella
Kuphendulwe igaraji lolunye uhlu lwethu laba yifulethi elisezingeni eliphezulu lokulala elingu-1 labahambi bebhajethi. Hlala endaweni efunwa kakhulu yaseNaguru ngaphandle kokugqekeza ibhange.
Ifulethi lestudiyo lisemafulethini Omphakathi WaseMpumalanga Afrika, okungesinye sezakhiwo zokuqala ukwakhiwa phezu kweNaguru Hill. I-relic ekhangayo yezinsuku zakudala ezibambele yona phakathi kokwakhiwa kwenkathi entsha. Itholakala ikakhulukazi endaweni ephakathi nendawo eneholo eliphezulu kwenye yezindawo ezifunwa kakhulu eKampala. Sisendaweni efinyeleleka kalula ngokuhlomula imizila eminingi yethrafikhi eya enkabeni yedolobha okungaba yimizuzu eyi-10 uma uhamba ngemoto ngezinsuku ezingenazo izimoto. Okunye okuseduze kunezinye izindawo ezingomakhelwane abasezingeni eliphezulu njengeBukoto, Kololo, Ntinda, Mbuya ezinezindawo ezithakazelisayo ezifana nezitolo ezinkulu, amakilabhu ezwe, izindawo zokudlela eziningi zokudla, amathofi kanye nezindawo zasebusuku. Imakethe yaseNakawa iseduze lapho ungathenga khona umkhiqizo omusha noshibhe kakhulu! Le ndawo ihlinzeka ngokuthula, ukuzola nokuvikeleka kokuba se-suburban Kampala ngenkathi isaseduze ne-CBD.
4.77 ·39 okushiwo abanye
4.77 · 39 okushiwo abanye
I-Naguru iyindawo ethule, ephansi, esezingeni eliphezulu emaphethelweni eKampala. Isuswe kancane esenzweni senkaba yedolobha enomsindo, kodwa imbozwe uhlaza oluluhlaza. Thatha uhambo lwakusihlwa noma ugijime endaweni ngaphandle kokukhathazeka emhlabeni. Indawo ephephile, evikelekile futhi elula.
Indlu yonke ingeyakho kuphela. Sihlala ngokuhlukana ngaphandle kwesakhiwo futhi siphila izimpilo ezimatasa kakhulu kodwa sizohlala sinomuntu otholakalayo futhi okhona ukuze sixoxe, ukukunikeza usizo noma izincomo ngocingo, i-imeyili noma mathupha ngesikhathi esivumelana nawe.
Indlu yonke ingeyakho kuphela. Sihlala ngokuhlukana ngaphandle kwesakhiwo futhi siphila izimpilo ezimatasa kakhulu kodwa sizohlala sinomuntu otholakalayo futhi okhona ukuze sixoxe,…